စနေသားသမီများအတွက် ၂ဝ၂ဝ ခုနှစ် တစ်နှစ်စာကံကြမ္မာအဆိုးအကောင်းဟောစာတမ်း
စနေသားသမီများအတွက် ၂ဝ၂ဝ ခုနှစ် တစ်နှစ်စာကံကြမ္မာအဆိုးအကောင်းဟောစာတမ်း ယခုနှစ်တွင်မိမိလက်ရှိလုပ်ကိုင်နေသောအလုပ်အကိုင်မှာအကျိုးအမြတ်ထူးထူးခြားခြားရရှိပါလိမ့်မည်။အလှူ အတန်းပြုရခြင်းနှင့်မင်္ဂလာပွဲများ စီစဉ်ပေးရခြင်းများ ပြုလုပ်ရတတ်သည်။အလုပ်နေရာ အိမ်နေရာ ပြောင်းရွှေ့ရတတ်ခြင်း ရွှေဝင်မည် ရတနာပစ္စည်းများဝင်မည်။စပ်တူရှယ်ယာ လုပ်ငန်းများပေါ်လာလိမ့်မည် လုပ်လျှင်အောင်မြင်၍ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းဖြစ်စေ၊ ဝန်ထမ်းဖြစ်စေကြီးပွားတိုးတက်အောင်မြင်မည့် ကာလနှစ်ဖြစ်သသည်။ မိမိအလိုဆန္ဒပြည့်ဝနိုင်ရန်မိမိကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျစီမံခန့်ခွဲပြီးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရမည်။မိတ်သင်္ဂဟအခြွေအရံများပေါများလာအောင်လူမှုရေးကိစ္စများလုပ်ပါ။အများလေးစားကြည်ညို ခံရတတ်ပြီးဘဝအထွဠ်အထိပ်ကိုရောက်ရှိပါမည်။ အဝိစီ၊ရေတွင်း၊ရေကန်ကိစ္စ များဆောင်ရွက်လျှင်အောင်မြင်မည်။ အဖိုးတန်ယာဉ်တွေ၊ စက်တွေ ဝင်လာမည်။ဘုရာဖူးခရီး၊ စိတ်ချမ်းသာဖွယ်ခရီးတွေလည်း သွားရတတ်ပါသည်။ယခုနှစ်တွင် စနေသားသမီးများ မိဘကို ကောင်းစွာ ပြုစုစောင့်ရှောက်နိုင်မည့် စီးပွား သိသိသာသာ တိုးတက်ပြိး”သိကြားမင်း” မလိုက်သကဲ့သို့ လက်ရှိအခြေအနေထက်ဘဝကံများစွာမြင့်တက်သွားပါလိမ့်မည်။ယခင်နှစ်များက ကုန်ဆုံးသော ဥစ္စာဓနများ ရွှေ၊ငွေ၊ရတနာများ ယခုနှစ်ထဲတွင် ရရှိ စုဆောင်နိုင်လိမ့်မည်။ စီးပွားရေး အထည်လက်လီလက်ကားအရောင်းအဝယ်၊ဆေးလုပ်ငန်း၊ ရေနံလုပ်ငန်း၊ ရေလုပ်ငန်း အကျိူးဖြစ်မည်။ပဲလုပ်ငန်း၊ မြေအရောင်းအဝယ် အခက်အခဲ …
သံသရာမှာ ကျင်လည်သမျှ မပူမပင် မကြောင့်မကြ အေးချမ်းစွာနေနိုင်မယ့် ဗုဒ္ဓယတြာ
သံသရာမှာ ကျင်လည်သမျှ မပူမပင် မကြောင့်မကြ အေးချမ်းစွာနေနိုင်မယ့် ဗုဒ္ဓယတြာ နံနက် အိပ်ယာထချိန်တွင် မိမိတို့အိမ်တွင်ရှိသော မြတ်စွာဘုရားကို မျက်နှာသစ်တော်ရေ၊သောက်တော်ရေချမ်းကပ်ပါ။ မျက်နှာသစ်တော်ရေနှင့် သောက်တော်ရေချမ်း ကပ်လှူသောအခါ ဘဒ္ဒကမ်ဘာတွင် ပွင့်တော်မူသော သဗ္ဗညုတမြတ်စွာဘုရားကို ဘုရားတပည့်တော်၊ တပည့်တော်မသည် မျက်နှာသစ်တော်ရေနှင့် သောက်တော်ရေချမ်းကို သဒ္ဒါကြည်ဖြူစွာ နိဗ္ဗာန်ရည်မှန်း လှူဒါန်းပါသည် အရှင်မြတ်ဘုရား။ ဤကဲ့သို့လှူဒါန်းရသော ကုသိုလ်ကံ စေတနာကြောင့် ဘုရားတပည့်တော်၊ တပည့်တော်မ၏ စိတ်သည် တစ်နေ့တာလုံး ဤရေကဲ့သို့အေးမြပါစေ။ပူပင်သောက ဟူသမျှသည် ပပျောက်၍ ဤရေကဲ့သို့ အေးချမ်းမှုရရှိပါစေ။ ဘုရားတပည့်တော်၊ ဘုရားတပည့်တော်မ နှင့် ကြုံရဆုံရသမျှသော ခုနစ်ရက်သားသမီး အပေါင်း၏ဘဝသည်လည်း ဤရေကဲ့သို့အေးချမ်းကြပါစေ။ ဘုရားတပည့်တော်၊ တပည့်တော်မ၏ ယ္ခုပစ္စုပ္ပန်၊ အနာဂတ် ဘဝတစ်လျှောက်လုံး စိုးရိမ်ပူပင်ကြောင့်ကြမှုအစုစုတို့သည် …
မိကျောင်းလည်ပင်းက တာယာကွင်းကြီးကို ဖြုတ်ပေးနိုင်သူအား ဆုငွေချီးမြှင့်မည်ဟု သိရ
သတ္တိကောင်းပြီး စွမ်းဆောင်ရည် ထူးချွန်တဲ့ သူရဲကောင်းတစ်ချို့ကို အင်ဒိုနီးရှားရဲ့ သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေက ကမ်းလှမ်းမှုတွေ ပြုလုပ်လာခဲ့ပါတယ်။ လုပ်ရမယ့်အလုပ်ကတော့ တော်ရုံရဲရင့်သူတွေ လက်ဖျားခါ နောက်ပြန်လှည့်သွားစေနိုင်မယ့် အလုပ်မျိုးဖြစ်လို့ အတော်လေး ခက်ခဲတဲ့အလုပ်လို့ ပြောရမှာပါ။မိကျောင်းကြီးတစ်ကောင်ရဲ့ လည်ပင်းကို မတော်တဆ တာယာကွင်းကြီးတစ်ခုက စွပ်မိနေခဲ့ရာ၊ အဲဒီမိကျောင်းကြီးမှာ (၂၀၁၆)ခုနှစ်ကတည်းကနေ အခုချိန်ထိ အတိဒုက္ခရောက်နေပါတယ်။ ဒီတာယာကွင်းကြီးကို ဖြုတ်ပေးနိုင်သူ မည်သူမဆို စူလာဝေဆီအလယ်ပိုင်း ပြည်နယ်အစိုးရက ဆုငွေချီးမြင့်မှာလို့ ထုတ်ပြန်ထားကြောင်း သတင်းဌာနက ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ အားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲ မိကျောင်းကြီးရဲ့ ဂုတ်ပိုးတစ်ဝိုက်မှာ တာယာကွင်းကြီးက ခိုင်ခံစွာ နေရာယူထားပါတယ်။ မိကျောင်းကြီးဟာ အရှည်အားဖြင့် (၄)မီတာအထိ ရှိတာကြောင့် ဖြုတ်ပေးဖို့ ချဉ်းကပ်မယ့်သူအနေနဲ့ မြောင်မြောက်တဲ့ ရဲစွမ်းသတ္တိအပြင် ကြံရည်ဖန်ရည်လည်း မဖြစ်နေ လိုပါတယ်။ဒါပေမယ့် …
​လောကမှာ သစ္စာဟာ အစွမ်းတန်ခိုး အင်မတန်မှ ထက်တယ် မယုံမရှိနဲ့ မေတ္တာပို့ပြီးသာ သစ္စာဆိုလိုက်ပါ
သစ္စာဆိုပြီးတော့ မေတ္တာပွားတဲ့နည်း အဲဒီဂါထာ ၃ ပုဒ်က ရတနသုတ်မှာ ပါပြီးသား သစ္စာဆိုတာ ဖြစ်တယ်။ ​လောကမှာ သစ္စာဟာ အစွမ်းတန်ခိုး အင်မတန်မှ ထက်တယ်။ လူတွေက သစ္စာဆိုမှု အင်မတန်မှ နည်းကြတယ်။ တကယ် ကိုယ့်ဟာကိုယ် သစ္စာဆိုပြီးတော့ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အရာတစ်ခုကို တောင်းလို့ရှိရင် သစ္စာရဲ့စွမ်းအားဟာ ရှိတယ်။ မယုံရင်တော့ လုပ်ကြည့်ပေါ့။ တစ်ခါတည်းနဲ့တော့ ရချင်မှရမှာပေါ့။ ဘာဖြစ်လို့တုန်း ဆိုတော့ သစ္စာစကားဟာ မှန်ကန်ဖို့လဲ လိုအပ်တယ်။ မှန်မှန်ကန်ကန်လဲ ဆိုရမယ်။ စိတ်စွမ်းအားတွေအားလုံး အသုံးချပြီးတော့ လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ သစ္စာဆိုတာ မှန်တာကိုပြောတာ။ ကိုယ့်ဟာကိုယ်လည်း သစ္စာဆိုလို့ရတယ်။ ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဆိုရင် အမှားရှိချင်ရှိနေမယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ရတနာသုံးပါးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သစ္စာဆိုပုံကို …
ကျောက်ကပ် မျက်စိ နှင့် အစာအိမ် အတွက် သီးသီးအစွမ်း
ကျောက်ကပ် မျက်စိ နှင့် အစာအိမ် အတွက် သီးသီးအစွမ်း ကျောက်ကပ်, မျက်စိ နှင့် အစာအိမ် အတွက် သီးသီးအစွမ်း အညာဒေသ မှာတော့သီးသီး အရမ်းပေါ၏ စားသာစားနေတာ ဆေးစွမ်း ဒီလောက်ထက်မှန်းခုမှ သိရတယ်ဗျာ Wood apple လို့ခေါ်တဲ့ သီးသီး၏ ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများ သီးသီးမှာ လုံးဝိုင်းပြီး သစ်သားရောင် သန်းနေပါတယ်။ သီးသီးက မာကျော်ပြီး အပြင်အရောင်မှိုင်းကာ အတွင်းမှာ ညိုရောင်သန်းနေတဲ့ အနှစ်ရှိပါတယ်။ သီးသီးမှာ ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူး အများအပြားရှိတာကြောင့် တန်ဖိုး အရှိဆုံး ဆေးဖက်ဝင် အပင် အမျိုးအစား တစ်မျိုးအဖြစ် အိန္ဒိယမှာ အသုံးများကြ ပါတယ်။အောက်ဇဲလ်လစ်၊ မဲလ် လစ်၊ ဆစ်ထရစ်နဲ့ …
အိမ်သုံးရေကန်တွေထဲမှာ အရက်တွေရောက်နေတဲ့ ထူးထူးဆန်းဆန်းအဖြစ်
အိမ်သုံးရေကန်တွေထဲမှာ အရက်တွေရောက်နေတဲ့ ထူးထူးဆန်းဆန်းအဖြစ် အိန္ဒိယနို င်ငံ၊ ကီယာလာခရိုင်ထဲက အိမ်ယာဝန်းတစ်ခုမှာ နေထိုင်ကြတဲ့ မိသားစု (၁၈) ခုဟာ ဖေဖော်ဝါရီလ (၅)ရက်နေ့က ထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုနဲ့ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ အိပ်ယာကနိုးတဲ့ မနက်ခင်းမှာ နေအိမ်သုံး ရေပိုက်ခေါင်းကို ဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲ အထဲက ရေတွေဟာ ပုံမှန်နဲ့မတူပဲ ထူးဆန်းတဲ့အနံ့တစ်ခုနဲ့ ထွက်လာခဲ့တာပါ။ တချို့မိသားစုတွေက သတိထားမိခဲ့ကြပေမယ့် တချို့ကတော့ အဲဒီအဖြစ်ကို သတိမထားမိခဲ့ပါဘူး။ တကယ်တော့ မိသားစု (၁၈)စုရဲ့ သုံးရေတွေထဲမှာ အရက်တွေရောနေခဲ့တာပါ။ တချို့ကတော့ ရေဘုံဘိုင်ခေါင်းကို ဖွင့်လိုက်ကတည်းက အရက်နံ့တွေရနေတယ်ဆိုတာ သိသွားခဲ့ပြီး သင်္ကာမကင်းဖြစ်ခဲ့ကြပေမယ့် တချို့ကတော့ သတိမထားမိပဲ အဲဒီရေတွေကို ရေနွေးကျိုတာ၊ရေချိုးတာ စသဖြင့် လုပ်ခဲ့ကြပါတော့တယ်။အဲဒီ အကျိုးဆက်ကတော့ မူးယစ်ရီဝေတဲ့အဖြစ်ကို ရောက်ကုန်ကြတာပါပဲ။ …
ပရိသတ်တွေနဲ့အလှမ်းဝေးနေတဲ့ မင်းသားချော အောင်ရဲလင်းရဲ့ အနုပညာတွေမြင်တွေ့ခွင့်ရတော့မယ့် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး
ပရိသတ်တွေနဲ့အလှမ်းဝေးနေတဲ့ မင်းသားချော အောင်ရဲလင်းရဲ့ အနုပညာတွေမြင်တွေ့ခွင့်ရတော့မယ့် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး နိုင်ငံကျော်မင်းသားချော အောင်ရဲလင်းရဲ့ မမြင်တွေ့ရတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ သရုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုတော့ “နှင်းဆီရဲတိုက်”ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးမှာ ပြန်လည်မြင်တွေ့ရတော့မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ “နှင်းဆိရဲတိုက်” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကိုတော့ ဖေဖော်ဝါရီလ(၂၀)ရက်နေ့မှာ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးမှာရုံတင်ပြသမှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးမှာ နိုင်ငံကျော်အနုပညာရှင်တွေဖြစ်တဲ့ အကယ်ဒမီများရှင် မင်းသမီးကြီးမို့မို့မြင့်အောင်၊အကယ်ဒမီ ရဲအောင်၊မင်းသားချော အောင်ရဲလင်း၊ ကောင်းပြည့်နဲ့ ဒိတ်ဒိတ်ကြဲမင်းသမီးချော ရွှေမှုံရတီတို့က အဓိကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ “နှင်းဆီရဲတိုက်” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကိုတော့ ဒါရိုက်တာနေပိုင်မှ ရိုက်ကူးထားပြီး အချစ်တွေအလွမ်းတွေနဲ့ Romantic Drama ဇာတ်ကား ကောင်းတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးရေ ပရိသတ်တွေအလှမ်းဝေးကွာနေခဲ့တာ အတော်ကြာနေပြီဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံကျော်ဒိတ်ဒိတ်ကြဲ မင်းသားချော အောင်ရဲလင်းရဲ့ မရိုးနိုင်တဲ့သရုပ်ဆောင်ချက်တွေကို ဖေဖော်ဝါရီလ(၂၀)ရက်နေ့မှာ ရုံတင်ပြသတော့မည့် “နှင်းဆီရဲတိုက် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးမှာ မြင်တွေ့ရတော့မှာနော်။ ဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးရုံတင်ရင် သွားရောက်ကြည့်ရှု့အားပေးကြလိုက်ပါဦးနော်။ Photo …
ခြေချောင်းလေးတွေက ပြောတဲ့ သင့်ရဲ့ စိတ်နေသဘောထား နဲ့ အစွမ်းသတ္တိ ခြေချောင်းလေးတွေ တစ်ချောင်းခြင်းစီက ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နေသဘောထားနဲ့ ကိုယ်ဟာ ဘယ်လိုလူမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ဖော်ပြနေတယ်ဆိုတာ ယုံကြည်ပါရဲ့လား..? ခြေချောင်း ပုံသဏ္ဍန်အနေအထားတွေပေါ်မှာ မူတည်ပြီး မတူညီတဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတွေ ရှိကြပါတယ်။ ခြေထောက်အဖျားပိုင်းရဲ့ ပုံသဏ္ဍန်ကို ရောမပုံစံ၊ လေးထောင့်ပုံစံ၊ ဂရိပုံစံနဲ့ ဖြန့်ကျက်ပုံစံ ဟူ၍ (၄)မျိုး ခွဲခြားထားပါတယ် …။ (၁) ရောမပုံစံ ခြေထောက် ခြေချောင်းအားလုံးထဲမှာ ခြေမက သိသိသာသာအကြီးဆုံးဖြစ်နေပြီး ကျန်တဲ့ခြေချောင်းလေးတွေက အချိုးညီစွာ ရှိနေမယ်ဆိုရင် “ရောမခြေထောက်” အဖြစ် သတ်မှတ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုခြေထောက်မျိုးပိုင်ရှင်ဟာ ဖော်ရွေတတ်သူဖြစ်ပြီး၊ သြဇာညောင်းသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ လူမှုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး ကောင်းတဲ့သူဖြစ်ပြီး လူတွေအများကြီးရှေ့မှာ စကားပြောကောင်းတဲ့သူလည်းဖြစ်လို့ ဒီလိုခြေထောက်ပိုင်ရှင်များဟာ …
အမေစုကိုယ်တိုင်ဒီဇိုင်းဆွဲထားတဲ့ ဆွဲကြိုးလေးကို အမေစုဆီမှ လက်ဆောင်ရလိုက်တဲ့ ချယ်ရီထက်
ချယ်ရီထက်ဟာ ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည့်သူပြည်သားတွေ အသည်းနုလုံးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ လုံခြုံရေးကို အနီးကပ်စောင့်ရှောင်နေတဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ချယ်ရီထက်ဟာ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံ ဒေါ်အောင်ဆုကြည် ကိုယ်တိုင်ဒီဇိုင်းထားတဲ့ ဆွဲကြိုးလေးကို အမေစုကိုယ်တိုင်လက်ဆောင်ပေးရင်း လည်ပင်းမှာကိုတိုင်ဆွဲပေးခြင်းခံလိုက်ရပါတယ်။ အခုလို အမေစုကိုယ်တိုင်ဒီဇိုင်းဆွဲထားတဲ့ ဆွဲကြိုးလေးကို လက်ဆောင်ရလိုက်တဲ့ ချယ်ရီထက်အတွက် ပြည့်သူတွေကလည်း “ကြည်နှုးမိပါတယ်ညီမ‌လေး! သားအမိနှစ်‌‌ယောက်ရဲ့ ချစ်ချင်း‌မေတ်တာကို‌ဖော်ကြူး‌နေသလိုပါဘဲ!သမိုင်းဝင်ပုံရိပ်က‌လေးပါ” လို့ ထပ်တူကြည်နှုးဝမ်းမြောက် နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ချယ်ရီထက်ဟာ အမေစုဆီမှ အခုလိုလက်ဆောင်ရလိုက်တဲ့အပေါ်မှာတော့ “ဘဝရဲ့အရေးကြီးတဲ့အချိန်တွေမှာ တိုင်ပင်ဖော် သားတွေသမီးတွေမြေးတွေနဲ့ မဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့အမေ့ကို စာနာမိတယ်။ ဘဝမှာ အမှတ်တရ အဖြစ်အမြဲရှိနေမဲ့နေ့လေးတနေ့ပါ။ပျော်လွန်းတယ်ဆိုတာထက် (အမေကိုယ်တိုင် ဒီဇိုင်းဆွဲပီးလုပ်ပေးတာနော်ချယ်ရီတဲ့) ရင်ထဲမှာဖြစ်လာရတဲ့ ခံစားချက်က အတိုင်မသိအောင်ပါပဲ။ အမေကိုယ်တိုင်တဲ့လား Cherry Htet (၈ .၂.၂၀၂၀)” လို့ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံ …
အိမ်တွင်းအပူတွေငြိမ်းပြီး လာဘ်လာဘပွင့်လန်းစေရန် အကောင်းဆုံးပြုလုပ်ရမည့် ယတြာလက်ဆောင် အိမ်တွင်းအပူတွေငြိမ်းပြီး လာဘ်လာဘပွင့်လန်းစေရန် လင်မယား မကြာခဏ စကားများ ရန်ဖြစ်ခြင်းဘေးမှကင်းဝေးစေရန် အကောင်းဆုံးပြုလုပ်ရမည့် ယတြာလေးလက်ဆောင်အဖြစ် ပေးလိုက်ချင်ပါတယ် …။ ယတြာနည်းလမ်းလေးကတော့ လွယ်ကူပြီးရိုးရှင်းပါတယ် ပထမဦးဆုံး ရှာဖွေရမှာကတော့ သံပရာသီးအဝါရောင်တစ်လုံး နဲ့ လေးညှင်းပွင့် ခုနှစ်ပွင့်ကို မဖြစ်မနေရှာဖွေရမှာ ဖြစ်ပါတယ် …။ ပြုလုပ်ပုံအဆင့်ဆင့်ကတော့ သံပုရာသီးအဝါတစ်လုံးအား အလယ်တည့်တည့်မှ ထက်ခြမ်းခွဲပြီး သံပုရာသီး အသားထဲသို့ ရှာဖွေထားသောလေညှင်းပွင့် ခုနှစ်ပွင့်စီကို စနစ်တကျ စိုက်သွင်းကာ အိမ်အဝင်ပေါက် တံခါး ဘေးတဖက်တချက် ထားပြီး သောကြာနေ့မနက်ပိုင်း ပြုလုပ်ပါ …။ ထိုသို့ပြုလုပ်ပြီး တပါတ်လောက်ကြာမြင့်ပြီး သောကြာနေ့တွင် သင့်ရာနေရာ၌ စွန့်ကာ အသစ်ထပ်မံနောက်၁ကြိမ် ပြုလုပ်ကြည့်လိုက်ပါ …။ …
This Year : 147070
Total Users : 442203